जीवनशैली Archives - Aamsanchar
डा. मधुर बस्नेत र डा. केदार मरहट्टा पछिल्लो समय एक उदीयमान कीर्तिमानी महिला खेलाडीले प्रतियोगिताको तयारीकै क्रममा आत्महत्या गरेको खबरले मिडियामा निकै चर्चा पायो । आसन्न एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामै पदक जित्ने आशा राखिएकी राष्ट्रिय खेलाडीको […]
ओशो डिभाइन डोर्स : खुशी र आनन्ददायी जीवन जिउने कलाको अभ्यास
हर्कटे। ओशो डिभाइन डोर्सको आयोजनामा तीन दिने ओशो ध्यान शिविर आइतबार राति हर्कटेमा सम्पन्न भएको छ । ध्यान शिविरको सहजीकरण ओशो शिष्य स्वामी आत्म निरभले गरेका थिए । शिविर समापनमा पाँच जनाले स्वामी आत्म निरभबाट […]
सोमवार, जेठ १६, २०७९
अधिकांश नेपालीसँग मिल्नै एउटै रोग छ भने, त्यो ग्याष्ट्रिक नै हो । किन नेपालीहरुलाई ग्याष्ट्रिक हुन्छ ? यसको सटिक जवाफ हो, ‘खराब खानपान ।’ खाना र खाना खाने शैलीको कारण नेपालीहरु यस समस्याबाट ग्रसित छन् […]
बूढेसकाल मा यौन दुर्बलता हुनु स्वाभाविकै हो । बुढेसकाल मा यौन चाहना हुने भए पनि यौन शक्ति कम हुँदै जान्छ । युवाअवस्थामै यौन दुर्बलता हुनु समस्या हो । व्यक्तिको तल्लो थालामस, पिट्युटरी ग्रन्थी र लक्षित […]
मंगलबार जन्मेका व्यक्तिको स्वभाव यस्ता छन् । १, मंगलबार जन्मेका व्यक्तिहरु निकै बहादुर, स्मार्ट र एक्टिभ हुने गर्दछन् । २, यी व्यक्तिहरु अरु मानिसहरुलाई सहयोग गर्न सधैँ तत्पर रहन्छन् । उनीहरुको स्वभाव परोपकारी किसिमको हुने […]
बिहीबार, शुक्रबार उल्लासमय वातावरणमा होली पर्व मनाइँदैछ । यस दिनमा आफन्त तथा मन मिलेका साथीबीच प्राकृतिक रूपको अबिर तथा पानीको पिच्कारी एक आपसमा छ्यापाछ्याप गरिन्छ । यो पर्व मनाउँदा आफ्नो छाला तथा कपाललाई सुरक्षित राख्नुपर्ने […]